BAZ Yoti Haina Mari Yekutenga Michina Yekuongorora Dzinhepfenyuro
Chikunguru 07, 2011
Boka rinoona nezvekupihwa kwemarezenisi enhepfepyuro, reBroadcasting Authority of Zimbabwe, kana kuti BAZ, raudza komiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kwemashoko kuti harina mari yekutenga michina yekuona mashandiro enhepfunyuro itsva dzinenge dzapihwa marezenisi sezvinodiwa nemutemo.
BAZ yatiwo nhepfenyuro yeZBC haisi kuipa mari sezvinodiwa nemutemo.
Asi vamwe vati nyaya yekuti BAZ haina mari yekutenga michina inodiwa pakuongorora vachapiwa marezinesi ekutepfenyura vakazvimirira inzira yerimwe divi muhurumende risiri kuda kuti munyika muve nenhepfenyuro dzakawanda.
MDC-T inoti haicherechedzi BAZ nokuti yakagadzwa zviri kunze kwechibvumirano cheGlobal Political Agreement.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika pamwe nezvenhau, VaPedzisai Ruhanya, avo vanoshanda neCrisis in Zimbabwe Coalition enyika vati danho rakatorwa neBAZ rekushambadza marezinesi ndere kungoda chete kubata kumeso sangano reSADC panyaya yekugadzirisa zviri kunetsa muhurumende yemubatanidzwa.
Nyanzvi mune zveupfumi, uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, VaProsper Chitambara, vaudzawo Studio7 kuti BAZ inogona kushaya mari kubva kuZBC sezvo nhepfenyuro iyi isiri kuwana mari kubva muzvirongwa zvairi kushambadza, zvikuru zvinoiswa nebato reZanu PF.
Hurukuro naVaPedzisai Ruhanya pamwe naVaProsper Chitambara